Ungayakha Kanjani Imibono Yokuqukethwe Yomthengi Omusha | Martech Zone
Ungayakha Kanjani Imibono Yokuqukethwe yeKlayenti Elisha
NgoMsombuluko, Novemba 25, 2013 NgoMsombuluko, Novemba 25, 2013 Douglas Karr
Le yi-infographic ethokozisayo ekwakheni imibono yokuqukethwe yeklayenti elisha kepha angiqiniseki ukuthi ngiyavumelana nesiqondisi secebo eliphelele. Empeleni bengizokufaka lokhu ngibheke phansi bese ngiqala ukuthi ngubani ikhasimende - hhayi ukuthi ngubani inkampani. Ngemuva kwalokho bengizonquma inani ongalinikeza lelo khasimende… bese ngisebenza ngisuka lapho. Ngikholwa ukuthi izinkampani eziningi zenza iphutha lokugxilisa okuqukethwe kwazo kuzungeze zona esikhundleni sokuzungeza amakhasimende azo.
Ikhasi elingenalutho lingaba yinto esabisayo, ikakhulukazi uma usanda kuqala ngephrojekthi yokuqukethwe yeklayenti elisha. Kepha ukuqhamuka nemibono akunzima njengoba kubonakala. Ukuthuthukisa imibono emisha iklayenti lakho elizoyithanda kulula njengokulandela izinyathelo ezimbalwa. Nge- CopyPress
Ngakho-ke i-oda lami lizoba ngu-5, 3, 2, 4 bese kuba ngu-1! Hlala ubeka ikhasimende lakho phambili kumasu wakho wokuqukethwe. Amakhasimende ayinandaba nenkampani yakho, ayikhathalele imikhiqizo nezinsizakalo nokuthi azozuza kanjani kuyo. Thengisa ikhasimende bese uvumela ikhasimende linqume ukuthi yini ebalulekile - bese ulinikeza. Ngingeza ukuthi akukhona konke okuqukethwe okufanele kuhambisane nezinhloso ZAKHO. Usenganikeza inani ngokukhangisa kokuqukethwe ngokumane unikeze inani ezinhlosweni zekhasimende!
Sivame ukwabelana ngezeluleko ezinhle zokumaketha kule bhulogi ezikhomba kusisetshenziswa sangaphandle. Akuwona umgomo wethu ukuhambisa abantu baye kwenye indawo lapho bengazoguqula nathi noma umxhasi! Kepha kusenza isisetshenziswa esibalulekile sokubuyela lapho isivakashi sidinga imininingwane ngokuzayo.
Tags: iklayentiimiqondo yokuqukethweUkukhangisa Okuqukethwe
I-Whitepaper: I-Prospecting Automation inyusa kanjani Amanani Wokuguqulwa
Impahla: Ukwenza ngezifiso iwebhu yesikhathi sangempela
Nov 25, 2013 ngo-2: 35 PM
Sawubona Douglas, ngiyabonga ngokwabelana ngeCopressPress Infographic yethu! Ngiyavumelana nawe ukuthi amakhasimende amaklayenti ayinto ebalulekile futhi kufanele afakwe kulesi simo. Ngicabanga ukuthi lapho sizama ukugcina i-IG ifushane, sehlulekile ukwengeza umbuzo othi “Obani abalaleli / obani amakhasimende? Bathandani? ” Mhlawumbe kufanele sikuguqule kube yi-IG yaso. http://community.copypress.com/ideation-guide/who-is-the-audience/
Nov 25, 2013 ngo-4: 09 PM
Ngicabanga ukuthi lokho kungenza i-infographic emangalisayo, @raubimarieperilli: disqus.
Nov 25, 2013 ngo-10: 17 PM
Okunye okuthunyelwe okuhle uDouglas! I-infographic yinhle .. Siyabonga ngokwabelana!
Dec 4, 2013 ngo-2: 01 PM
Amen, Amen, Amen. Amakhasimende angaba khona awakhathaleli ukuthi ugqoke ngokwemvelo kangakanani noma ukuthi inkampani yakho ye-cdo inkulu kangakanani noma ngisho intengo! Umkhiqizo noma insiza yakho izosizakala kanjani! Uma bengadingi ukuthi ithi tyvm ngesikhathi sakho, susa lo "msolwa" bese uyofuna "ithemba."